vista shortcut arrow — MYSTERY ZILLION
vista shortcut arrow
October 2008 edited November 2008 in Windows Vista
Vista မှာ shortcut arrow လေးတွေဖြောက်ချင်လို့ပါ?????
ဒီမှာ download လုပ်လို့ရတယ်။
Vista Shortcut Manager တဲ့
ဒီမှာလည်း down နိုင်တယ်။
"This installation package is not supported by this processor type. Contact your product vendor."ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်..
ကျွန်တော့ processor က Intal(R)Core(TM)2 Duo CPU [email protected] 2.20 GHz ပါ
Use "Tune Up Utilities 2008 software"
for removal of shotcut arrow in vista
I granty 100%
မြှားလေးဖျောက်ဖို့တစ်ခုတည်းနဲ့ software တစ်ခုလုံးတော့ install လုပ်မထားချင်ပါဘူး။ registry ထဲမှာသွားပြင်လို့မရဘူးလား....။ windows xp မှာတော့ ရတယ်နော့်....။ကျွန်တော်ကမေ့နေလို့ပါ..။သိတဲ့သူများရှိရင် ၀င်ကူညီပါအုံး...။:106:
Assign to 29avalue of: %SystemRoot%\_\_noarrow.ico,0
Tip: Add this Value, CurrentVersion\_explorer to Regedit's Favorites menu. :103: :103: